Shopify Order mezuo, ịtụ ahịa Ecommerce - Sunson
Njuputa na azịza nke mmiri
maka ọnwa 3 n'efu nchekwa amalite iji ọrụ anyị
n'efu nwalee ngwugwu 2 maka onye ahịa ọhụrụ
Banye maka Free →
Buru & mkpọ
Anyị na-enye ndị ahịa anyị ndị kachasị mma na eCommerce iji mezuo site na China ruo na Worldwide…
Mmezu bụ ihe karịrị iwu mbufe nye ndị ahịa gị. Ọ bụ maka imepụta ahụmịhe izizi klaasị nke na-ahapụ mmetụta na-adịgide adịgide, nke na-eme ka ndị ahịa gị na-abịaghachi ịtụ ahịa ugboro ugboro.
Rlọ nkwakọba ihe ntụkwasị obi gị & Mmezu Mmezu na China.
Anyị ọkachamara otu na ọgụgụ isi mmezu software.
Dịka ụlọ ọrụ na-emezu teknụzụ na-arụ ọrụ na China, Sunson nwere shenzhen Fillillment Center na Guangzhou Fulfillment Center, na-eji sọftụwia amamịghe iji nye usoro dị mfe na ntụkwasị obi maka azụmaahịa ecommerce, na-azụ ahịa oo Woo-commerce na nnukwu azụmahịa ， Amazon, Ebay, chọrọ, wdg.
Sunson kpebisiri ike ịnye ụlọ nkwakọba ihe echekwara, mmezu nke ọma, nhọrọ nchịkọta dị iche iche, ngwọta mbupu mgbanwe na ọrụ ndị ọzọ bara uru iji nyere gị aka ịkwalite azụmahịa gị site na obere oge na ego.
Ọrụ mbupu ụwa
28 2020. Og
Onye na-agbanwe egwuregwu na ụwa nke eCommerce, ọ bụghị ọzọ karịa ikpo okwu Shopify. N'ụzọ bụ isi, ngwa ịzụ ahịa na-agbakọ ahụmịhe ịzụ ahịa mkpanaka niile, ya bụ, nchọta, ịkwụ ụgwọ, na nnyefe n'otu ngwa. Ndị ahịa na-eji ngwa email abanye na ngwa ahụ, na-eso Shopi dị iche iche ...
N'ihe banyere ebe nrụọrụ weebụ e-commerce gị, ịnye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ (UX) na-ewe ihe karịrị naanị mma mara mma. Ọ gụnyere ọtụtụ ihe, ha niile na-arụkọ ọrụ ọnụ, iji nyere ndị na-agagharị na saịtị ahụ aka iru na ịchọta ihe ha na-achọ. Site na nkọwa ngwaahịa na ...
Bido ụbọchị 90 n'efu
Maka ozi ndị ọzọ, biko banye ma ọ bụ debanye aha na interface ndị a.